ULIMI ISpanishi Isi-Albania Isi-Amharic Isi-Arabhu Isi-Armenia Isi-Azerbaijani Isi-Azerbaijani (SesiCyrillic) Isi-Efik Isi-Estonia Isi-Ewe Isi-Iceland Isi-Igbo Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Oromo Isi-Ukraine Isi-Urdu IsiBemba IsiBengali IsiBhunu IsiBulgaria IsiCatalan IsiCebuano IsiChewa IsiCroatia IsiCzech IsiDanishi IsiDashi IsiFiji IsiFinishi IsiFulentshi IsiGeorgia IsiGreki IsiGujarati IsiHebheru IsiHiligaynon IsiHindi IsiHungary IsiJalimane IsiJapane IsiKannada IsiKazakh IsiKikaonde IsiKikuyu IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKorea IsiLingala IsiLithuania IsiLozi IsiLuganda IsiLuvale IsiMacedonia IsiMalagasy IsiMalayalam IsiMalta IsiMarathi IsiMyanmar IsiNepali IsiNgisi IsiNorway IsiNtaliyane IsiPangasinan IsiPedi IsiPolishi IsiPunjabi IsiPutukezi IsiQuechua (Sase-Ayacucho) IsiQuechua (SaseCuzco) IsiRashiya IsiRomania IsiSamoa IsiSerbia IsiSerbia (SesiRoma) IsiShayina SesiMandarin (Esenziwe Lula) IsiShayina SesiMandarin (Sezinhlamvu Zakudala) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSuthu (SaseLesotho) IsiSwahili IsiSwahili (SaseCongo) IsiSwidi IsiTagalog IsiTahiti IsiTamil IsiTatar IsiTelugu IsiTetun Dili IsiThai IsiTigrinya IsiTok Pisin IsiTonga IsiTsonga IsiTswana IsiTumbuka IsiTurkey IsiTwi IsiVietnam IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu
Uma kukhulunywa ngobudlelwane, ingabe iBhayibheli liyindawo yokuqala ongaya kuyo ukuze uthole iseluleko, noma mhlawumbe liyindawo yokugcina? Qhathanisa ukuhlakanipha kwalo okwalotshwa endulo nocwaningo lwamuva.
Intsha engamaphesenti angu-61 eneminyaka engu-18 kuya kwengu-25 ikholelwa ukuthi ukuya ocansini ungashadile “akuseyona into enkulu eNdiya,” ngokusho kocwaningo lwango-2014. Udokotela ohlala eMumbai watshela iphephandaba i-Hindustan Times ukuthi ngokombono wakhe, “lapho abasebasha beqala ukuthandana nothile akusho ukuthi basuke becabanga ngomshado. Kungakhathaliseki ukuthi bazithokozisa ubusuku obubodwa ngocansi, bathandanela ukuzijabulisa kuphela, noma bahlalisene, ukuzibophezela akuyona into esemqoka kubo.”
ONGACABANGA NGAKHO: Ingabe izifo ezithathelwana ngocansi kanye nokuhlukumezeka ngokomzwelo kuhlobene kakhulu nokuya ocansini ngaphambi komshado noma ngemva komshado?—1 Korinte 6:18.
Ukuba nezingxabano njalo namalungu omndeni kuhlotshaniswa nokuphindeka kabili kwamathuba okuba ufe uneminyaka ephakathi kuka-35 kuya ku-50. Abacwaningi baseNyuvesi yaseCopenhagen balandelela abantu abacishe babe ngu-10,000 abaneminyaka ephakathi kuka-35 kuya ku-50 esikhathini esingaphezu kweminyaka engu-11 futhi bathola ukuthi kulabo bantu, ababexabana njalo nomuntu abasondelene naye babesemathubeni amaningi okusheshe bafe kunalabo okwakwethukela bexabana nabanye. Umbhali walolo cwaningo uthi ukusingatha izinkathazo nezinto eziyizidingo kanye nokulawula izingxabano “kungabhekwa njengamasu abalulekile okunciphisa amathuba okusheshe ufe.”
IBHAYIBHELI LITHI: “Noma ubani ogodla amazwi akhe unolwazi, nomuntu onokuqonda unomoya ozolile.”—IzAga 17:27.
Ngokusho kocwaningo lwamuva olwenziwa kwabasanda kushada abangu-564 eLouisiana, labo abahlukanayo baphinde babuyelane ngesikhathi besathandana, basemathubeni amaningi okuba bahlale ngokwahlukana isikhathi esithile kungakapheli ngisho neminyaka emihlanu beshadile. Baphinde bathambekele ekubeni nezingxabano eziningi futhi banganeliseki ngomshado wabo.
OKUSHIWO IBHAYIBHELI: “Lokho uNkulunkulu akubophele ndawonye [emshadweni], makungahlukaniswa muntu.”—Mathewu 19:6.